Torohevitra efatra hialana amin'ny fanodinana ny kabinetra fitaratra LED！
amin'izao fotoana izao, people pay more and more attention to the quality and style of the led bathroom mirror cabinet. Ohatra, the bathroom furniture cabinets should not only have a good appearance and decoration but also increase the storage function of the toilet. Na izany aza, Betsaka ny karazana lavaka fandroana amidy eny an-tsena. Aorian'ny fampiasana maharitra, ny fiovaovan'ny kabinetra matetika no miseho. Ahoana no hisorohana ity tranga ity?? Manaraka i Frank dia mizara fomba maromaro hanakanana ny fanovana ireo vanin-trano fandroana sy kabinetra.
Amin'ny ankapobeny, the deformation of the bathroom cabinet is mainly due to the following three factors:
Ny voalohany dia ny fenitra ny kalitao sy ny kalitao dia tsy mahazatra; ny faharoa dia simba ny sarimihetsika miaro amin'ny fotodrafitrasa noho ny fikorisana mandritra ny fitaterana; the third is that the toilet is too humid and the wood is exposed to the humid environment for a long time.
1.Voalohany indrindra, rehefa misafidy ny kabine fandroana, tena ilaina ny marika.
Misy karazana kabine amin'ny fandroana maro eny an-tsena, Noho izany dia mora amintsika ny misafotofoto rehefa misafidy. Amin'ny ankapobeny, ho an'ny marika tsara, quality and after-sales are more guaranteed. Aorian'ny fahazoana kabinetra amin'ny efitrano fandroana, voalohany indrindra, jereo raha misy marika miparitaka eny ambonin'ny tany. Raha misy, tadiavo ny mpivarotra hamerenany azy ara-potoana.
2.When installing the washbasin on the bathroom wall cabinets, ny tonon-kodiarana dia tsy maintsy fehezina amin'ny lakaoly fitaratra. Izany dia mba hisorohana ny setroka anaty rano tsy hiditra amin'ny kabinetra amin'ny alàlan'ny hantsana, which will lead to moisture in the entire storage area, resulting in material deformation and even a peculiar smell. Amin'izao fotoana izao, the bathroom cabinet can not only play a role in storage but also affect the mood of the whole day.
3. Mba hampihenana ny fitarihan'ny hamandoana eo amin'ny kabine fandroana, ny trano fidiovana dia tokony hohajaina tsara.
Ny varavarankely misokatra sy ny mpankafy atin'ny efitrano fandroana dia ilaina, dia tsara kokoa angamba raha mitazona fisarahana mando maina. Mandritra izany fotoana izany, tsara kokoa ianao hisafidy ny kabinetra amin'ny efitrano fandroana miaraka amin'ny tongotra kabinetra avo, and with a 304 stainless steel footpad, ny lamosin'ny kabinetra dia tsara kokoa ny tsy akaikin'ny rindrina, mba hampahomby tsara ny hamandoana amin'ny tany sy ny rindrina.
4.Matetika dia diniho tsara ny fikojakojana ny kabine fandroana, manadio ara-potoana ao anaty kabinetra ny rano.
Amin'ny fiainana, tsy azo ihodivirana ny fantson'ny rano amin'ny fanasana sy ny paompy. Na izany aza, the joint between the basin and the table should be kept dry to prevent splashing water from staying on the cabinet surface for a long time, niafara tamin'ny fanitsiana ireo kabinetra. Amin'izao fotoana izao, hisafidy foam manankarena, faucet rano malefaka dia fomba mety hiarovana ny trano fandroana fandroana.
Above are the maintenance skills of the led bathroom mirror cabinet. Raha mila toro-hevitra matihanina sy fahalalana bebe kokoa ianao amin'ny fividianana kabine vanity misy lavaka, please contact Frank.